မတ်လ 14, 2012 တွင် 4:20 ညနေ
transposh မှတာရှည်သောအသက်ကို, ကျွန်မတိုင်ကြားလျှင်ပင်, ငါနေဆဲအသုံးပြုရန်🙂
ငါသည်အစစ်ဆေးပေးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လဲသေးနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကို update မပြုခဲ့
မတ်လ 27, 2012 တွင် 2:27 နံနက်
ငါသည်အဘယ်အသစ် function ကိုဟောင်းနွမ်းဗားရှင်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မသိသောကြောင့်ယခုတွင်ငါသည်မွမ်းမံပါဘူး. တဖန်သင်တို့အစစ်အမှန် .html စာမျက်နှာတိုင်းစာမျက်နှာစေနိုင်သည်သော function တစ်ခုထည့်သွင်းထားနိုင်တယ်, ဒီပိုမြန် wordpress ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။.
မတ်လ 27, 2012 တွင် 10:53 နံနက်
UPDATE ယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းတစ်ဦးအရာဖြစ်၏, ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးကအောင်နှင့် ပတ်သက်., သင်က cache ကို plugin ကိုအသုံးပြုဖို့စဉ်းစားပါ (ထိုကဲ့သို့သော wpsupercache အဖြစ်) ကဖြစ်နိုင်သင့်အဘို့အရှာဖွေနေတဲ့တိုးတက်မှုရရှိဖို့လိမ့်မယ်.
မတ်လ 30, 2012 တွင် 4:31 ညနေ
ငါသည်ကြာမြင့်စွာအဘို့ဤ plugin ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်. သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ hosting အတွက်ငါ့ကိုအကျွန်ုပ်တို့၏ site Overload CPU ကိုပြောသည်, ဒီ plugin ကိုဒီပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ပါဘူး?
မတ်လ 31, 2012 တွင် 2:28 ညနေ
ဒီ plugin ကို CPU time ကိုလောင်ပါပေ, တစ့် Cache memory အတွက်ထောက်ခံဖြေရှင်းချက်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါအကြီးအကျယ်မှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည့်, ထိုကဲ့သို့သော memcache သို့မဟုတ် APC အဖြစ်
အဲဒီအကြောင်းသင့် hosting provider များမေးမြန်းနိုင်
ဧပြီလ 7, 2012 တွင် 5:26 နံနက်
မင်္ဂလာပါ, သတိထားမိ, သောဘာသာစကားပြောင်းလဲနေတဲ့ပြီးနောက်ဧည့်သည်တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူများ၏အဆင့်အတန်းကိုပြောင်းလဲစေသည်.
ဧပြီလ 28, 2012 တွင် 11:42 ညနေ
ဇွန်လ 17, 2012 တွင် 8:02 နံနက်
WP အတွက် 3.4 + Transposh 0.8.2 ဒီပြဿနာတစ်ခုမက, ဖြစ်နိုင်အကြောင်းပြချက် WP ခဲ့သည်.
ဧပြီလ 9, 2012 တွင် 7:07 ညနေ
ဂရိတ် plugin ကို, အေးတယ်နော်.
သို့သော်ဘာသာပြန်ချက်၏ syntax ကိုအတော်လေးထူးခြားသည်, ကိုတည်းဖြတ်သည့်အခါအခြားသောအရပ်မှဝါကျအစိတ်အပိုင်းများထားရန်မည်သည့်လမ်းလည်းမရှိ?
ဧပြီလ 28, 2012 တွင် 11:39 ညနေ
ဆဲကြောင်းပေါ်လုပ်ဆောင်နေ, ဒါပေမဲ့ parser.php ဖိုင်ရဲ့ထိပ်မှာပြောင်းလဲသွားစေမည်အကြောင်းအနည်းငယ်အမြဲမပြတ်ရှိတယ်, ဒီဖြစ်ကောင်းအနာဂတ်၌ထောက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါစေမည်ဖြစ်သော်လည်း, ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သင့်ရဲ့လက်ရှိဘာသာပြန်ချက်များကိုဝင်တော့ပါလိမ့်မယ်.
မေ 2, 2012 တွင် 3:43 ညနေ
ဟိုင်း ! ကိုယ့် website ကပါဝင်သူပြုလုပ်ခြင်း😉သင့်ဘလော့ခ်ပို့စ်ရဲ့ပြင်သစ်ဗားရှင်းတညျ့တို့သည်ကြီးစွာသော idea က, သင့်ရဲ့ plugin ကိုဖြစ်သကဲ့သို့!
အကြှနျုပျတို့တွင်ဘာသာစကားမျိုးကွဲနယ်နိမိတ်ဖွင့်လှစ်ကူညီခြင်းကသင့်မှုကြီးအတော်များများကကျေးဇူးတင်စကား, Transposh ရန်နှင့်မင်္ဂလာမွေးနေ့!
မေ 2, 2012 တွင် 3:48 ညနေ
Oh လမ်းဖြင့်, vs အင်္ဂလိပ်နှင့်ပြင်သစ်တို့အကြားနာမ်၏အနေအထား. adjective နာမဝိသေသန switched ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်အတော်လေးကျပန်းစာကြောင်းများဖြတ်တောက်၏ trasposh ရဲ့နည်းလမ်းနှင့်အတူ, အချို့စာကြောင်းများစနစ်တကျစကားများပြန်လည်နေရာချထားနည်းလမ်းမရှိနှင့်အတူ fuzzy မှုတ်စေသည်… အပိုင်းပိုင်းသို့အစားအတော်လေးကျပန်းသူတို့ကိုဖြတ်တောက်စာကြောင်းများခုတ်ဖြတ်ဖို့ ponctuation ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်မဆိုလမ်းရှိပါသလား?
မေ 3, 2012 တွင် 9:58 နံနက်
ပြင်သစ် version ကိုပြုပြင်တာတွေများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, မြင့်မားတန်ဖိုးထား. plugin ကိုကိုယ်တိုင်ကများအတွက်အလားတူလုပ်ဂရုစိုက်?
ကျပန်းစကားဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း, ထိုသို့ကျပန်းစကားမဟုတ်ပါ, က html အဖွဲ့အစည်းများအပေါ်ဖြတ်မည်, နံပါတ်များ, ပုဒ်ဖြတ်စနစ်နှင့် html. သူတို့သည် parser ကိုဖိုင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်စေမယ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်, ကျနော်တို့ခြုံငုံဖြစ်စဉ်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေအပေါ်လုပ်ဆောင်နေကြပါသည်. သင်ဖော်ပြထားသောပြဿနာများကိုခြင်းအပြင်ထိုကဲ့သို့သောအချို့ဘာသာစကားများတွင် dual-အဓိပ္ပာယ်နှင့်ကျားမဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်အတူစကားသည်ရှေ့နောက်စကားနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ပြဿနာတွေရှိပါတယ်. ဒါကြောင့်အဖြေဖြစ်ပါသည် “ဆဲကြောင်းပေါ်လုပ်ဆောင်နေ”.
မှတ်ချက်များနှင့် input အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မေ 3, 2012 တွင် 11:16 နံနက်
အဲဒီဖိုင်တွေကိုနှင့်အတူငါ့ကိုပေးနဲ့ “ဘယ်လောက်မှ” ငါသည်ထို plugin ကိုဘာသာပြန်ဆိုဖို့ငါအတတ်နိုင်ဆုံးပြုလိမ့်မည်.
နောက်ထပ်ပြဿနာ: အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်း / ပြင်သစ်တစ်ဦးမှာပေါ်လာမထားတဲ့ပုံရိပ်. အပေါ်စစ်ဆေးနိုင်သည် http://www.sahal.fr: ENG “Alexandre Sahal အကြောင်း” / FR “Alexandre Sahal အကြောင်း”
မေ 3, 2012 တွင် 11:44 နံနက်
ပဌမ, လိုနေတဲ့ပုံရိပ်နှင့် ပတ်သက်.. သင့်ရဲ့ဆောင်ပုဒ် timthumb ဟုခေါ်တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုသည် (ငါတစ်ချိန်ချိန်မှာလုံခြုံရေးပြဿနာခဲ့ပြန်အမှတ်ရ) စမလိုအပ်သည့်အရင်းအမြစ်များကိုစားသုံးတဲ့, ငါသည်သင်တို့ကိုသာမန် image ကို၎င်း tag ဖြင့်အရာဖြစ်ကောင်းပဲအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ကိုသုံးအကြံပြု.
plugin ကို၏ဘာသာပြန်နှင့်စပ်လျဉ်း, အဲဒီဖိုင်တွေကိုပြီးသားသင်သည်အဘယ်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်, အဖြစ်ဝေးကိုငါဟုခေါ် plugin တစ်ခုအားအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်ကိုမြင်ရသကဲ့သို့ .po / .mo ဖိုင်များကိုဘာသာပြန်ခြင်းအတွက်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း “codestyling ဒေသခံ” အတော်လေးဖြောင့်ရှေ့ကိုအရာဖြစ်၏.
ကျနော်တို့ JS / lang directory ထဲတွင်တည်းဖြတ်ကြားခံဘာသာပြန်ဆိုဖို့တစ်ဖိုင်ငယ်လည်းရှိသည်.
သဘာဝကျကျ – အကြွေးဘာသာပြန်များအားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်😉
မေ 16, 2012 တွင် 10:46 နံနက်
hi ငါအစားစိတ်ဝင်စားဖို့ပြဿနာရှိခြင်းခံရဖို့ဟန်ရှိ, ဒါကြောင့်အများစုဘာသာစကားများတူ (အဘိဓါန် Afrikaans, Íslenskaနှင့်ပိုပြီး) ပြဿနာတွေပေးပါနဲ့ menu ကိုပစ္စည်းများကိုဘာသာပြန်ရန်မ, နှင့်ခေါင်းစဉ်များမှာအားလုံး, အဘယ်အရာကိုမျှနှင့်အတူစာသားနေရာမှာအစားထိုးလိုက်ပါ။. ဒါကြောင့်သူတို့ကို၌အဘယ်အရာမျှနှင့်အတူကျွန်တော့်လုပ်ကွက်ရှိပါတယ်.
မူလကငါသည်ဤ cufon ကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့သည်ဟုထင်, သို့သော်လည်းငါ့ကိုယ်ကို default မှလွဲ. အားလုံးသောဘာသာစကားများအတွက် cufon ဖယ်ရှားရန်က customized တစ်ချိန်က. သို့သော်၎င်း၏နေဆဲဖြစ်နေတာ.
ကို Google API ကိုအဓိကသော့ချက်ပြင်ဆင်ချက်ဤကိစ္စကိုသုံးပြီးမလား?
မေ 20, 2012 တွင် 10:33 နံနက်
သင်မဟုတ်သော default ဘာသာစကားများအတွက် cufon ဖယ်ရှားပြီးနောက်, သင် 3rd ပါတီ wordpress ကို utility များအတွက်အော်တိုဘာသာပြန်ချက်ဒေတာဘေ့စနဲ့ cache ရှင်းလင်းရှိသည်?
Amir Colnect ကပြောပါတယ်
ဇွန်လ 29, 2012 တွင် 2:43 ညနေ
Transposh မှအနာဂတ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့် update ဖို့မျှော်လင့်. အကယ်စင်စစ်ကတစ်ကြိမ်ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်ကုန်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သွားမယ့်🙂
ဇူလိုင်လ 24, 2012 တွင် 12:45 ညနေ
ဒါဟာအတော်ကောင်းတဲ့ plugin တခုဖြစ်တယ်…ကျွန်မကျေးဇူးတင်တယ်နော်။.
ဥပမာအားဖြင့်…အင်္ဂလိပ်နဲ့ဂရိရှိပါက…ဘယ်လိုကိုယ့်ကိုဂရိဖောင့်မိသားစုကိုပြောင်းလဲနိုင် (Arial မှကားဟုပြောဆိုကြပေးနိုင်ပါတယ် – ပုံမှန်အားဖြင့်အကြောင်းတရားကြောင့် serif မိသားစုနှင့်အတူတက်လာ).
နိုဝင်ဘာလ 21, 2012 တွင် 10:13 နံနက်
သင့်ရဲ့ plugin ကိုကြီးလှပေ၏.
ဒီဇင်ဘာလ 5, 2012 တွင် 1:45 နံနက်